CFA Vs. FRM - Ndeupi Certification iri nani? [It's a Close Call!]
CFA Vs FRM: Ndeupi Certification iri nani?
23 Aug CFA Vs FRM: Ndeupi Certification iri nani?
Posted at 22:50h mu Alternate Articles kubudikidza Bryce Welker, CPA 0 Comments
Ko CFA kana FRM nani kuti Your Career?
Chii chinonzi CFA?
Chii chinonzi FRM?
CFA Vs FRM: Certification Zvinodiwa
CFA Vs FRM: Certification mari
CFA Vs FRM: mari
Uyu ndomumwe inowanzobvunzwa mibvunzo kuti vadzidzi vanofanira kuita pakusarudza kutsigira mabasa avo mari. Chisarudzo chako kunokosha nokuti mumwe nomumwe certifications Zvinoda basa rakawanda zvakaoma, mari uye nguva. Kusarudza kungava kwakaoma kana iwe usiri kuziva zvayo misiyano. The chikuru musiyano CFA uye FRM certifications ndiyo misoro zvakafukidzirwa. CFA rinofukidza yakakura dzaunogona mune mari akaita chepamusoro mari, Portfolio utariri, chizvidavirire, yakamisirwa mari, uye nomukaka. Pane rimwe divi, FRM ari kushandiswa ngozi utariri. wo, CFA anogadzirira iwe zvakanaka nedhigirii inivhesitimendi rwezvemabhengi, Portfolio utariri, tsvakurudzo zvemari. The FRM iri wakanyatsokodzera vaya vanoda kuita basa pangozi utariri mune mabhanga, yepfuma dhipatimendi kana mune mazano njodzi.
CFA anomirira Chartered Financial Nyanzvi uye ari advertising chichiwanikwa kuburikidza CFA Institute. CFAs vebazi iri inivhesitimendi utariri. Vamwe nevakawanda basa okuremekedza dzaidzidziswa CFAs zvinosanganisira Portfolio maneja, tsvakurudzo dzezvematongerwo, uye inivhesitimendi bhenga. Naivowo vanowanzoda kushanda chepamusoro mari.
FRM anomirira Financial Risk Manager uye ari advertising inopiwa Global Association of Nyanzvi Risk. GARP uye FRM advertising vari pose kuzivikanwa. FRMs rokuongorora sangano pangozi uye vave mazano kuderedza kana zvaizopedza nayo. Vanogona kuwanikwa kushanda rwezvemabhengi, makambani, twa utariri yemakambani, uye hurumende.
Kuti ave CFA, unofanira kunyoresa advertising chirongwa inopiwa CFA Institute. Kunyoresa chirongwa, unofanira nedhigirii kwemakore mana kana mubatanidzwa dzidzo / basa ruzivo uye zvakaitika chikamu matatu-bvunzo kufukidza wemisoro:
Zvinotora pamusoro 300 maawa nguva yokudzidza zvakaitika nerimwe pachiyero CFA bvunzo. wo, kugamuchira bumbiro, unofanira kuva nemakore mana kubva kufanana basa ruzivo pasi CFA. Unofanirawo kuva nhengo CFA Institute.
Kana uchida kuva FRM, unofanira kupfuura chikamu maviri-bvunzo ku Global Association of Nyanzvi Risk (GARP) kufukidza wemisoro:
Zvinowanzondipa Zvinotora FRM musarudzo dzinenge 150 maawa kudzidza mumwe bvunzo pamwero uye GARP rinokurudzira FRMs kutora 40 Maawa kuramba dzidzo pamakore maviri. Nepo GARP asingadi mudane chaiwo-gore mana dhigirii chinodiwa kana shoma nhamba chikwereti maawa, kuti abate basa iri pangozi Kutarisira zvakafanira kuti tsvimborume wacho. Kuti mari kana advertising, gadzirira mari zvikuru nguva yokudzidza uye bvunzo gadziriro.
Zviri kwese kuti CFAs vane zvakawanda mabasa nemikana pane FRMs nokuda dzakafara zvidzidzo zvavo uye unyanzvi, kunyanya managerial zvinzvimbo. CFAs dzidzira pazvinhu uye maximizing upfumi wakasimba kuti, izvo zvinogona kukanda yakafarikana mambure basa-akachenjera. CFAs yemanyorero kushanda ruzhowa mari, inivhesitimendi mabhanga, ezvokutengeserana mari kuita inivhesitimendi rwezvemabhengi, Portfolio utariri, Nokutendeka tsvakurudza. Pane rimwe divi, FRMs vari zvikuru kushandiswa Kusimbisa pokuongorora pangozi uye yokuzvifungidzira nzira kuderedza mukati kambani kana Portfolio. FRMs yemanyorero abate managerial uye Executive pamwero zvinzvimbo avo kunyanya pangozi uye inivhesitimendi pangozi.
The CFA bvunzo ane imwe-nguva chirongwa okuverengwa muripo weUS $450. Vose bvunzo yechikoro nechimwe pamwero yemanyorero mutengo $930. CFA musarudzo vangatarisira kubhadhara $1,100 kuti $1,700 kuwana gwaro ravo. Kutora FRM bvunzo, unofanira kubhadhara $400 Kunyorwa kubhadhara kuwedzera mari neimwe bvunzo. Part I mari $875 uye Part II mari $475. Unogona kutarisira kubhadhara $1,050 kuti $1,500 kuva FRM. Pass rate vaviri bvunzo vari 40 muzana dungwerungwe.
Mari chero basa kunobva basa rokuti, makore ruzivo, uye nzvimbo. CFAs anogona mari pakati $45,000 uye $180,000 pagore zvichienderana nzvimbo yavo, ruzivo, uye indasitiri. The FRM muhoro siyana zvikuru zvakafanana CFA muhoro siyana. FRMs yemanyorero kuwana $50,000 kuti $165,000.
Both mazita zviri zvakafanana kuremekedzwa pose uye hapana mumwe ari nani kupfuura vamwe. Inongova zvakasiyana. Nepo CFA rokuti zvakawanda kukura uye chakabatikana zvikuru upfumi, ari FRM unyanzvi kuongorora uye kushandisa mukana musangano. Zvaunosarudza pakati zviviri kunobva pachido apo zvaunofarira nhema uye chii unofarira kuita zvakawanda. Kana uchida kudzidza zvakawanda pamusoro zvakanakisisa CFA prep makosi you can go here. Hapana chikonzero nei haugoni kuva zvose. Zvose zvinoenderana zvaunoda kuita kwako basa. Zvine musoro Muchiitiko nokuva zvese CFA uye FRM kutaura kuti ichokwadi is if you are a CFA and would like to specialize in risk management. yeuka, ari FRM rokuti ndiyo nzira zvikuru kushandiswa kupfuura CFA. saka, zvinogona kuva zvinobetsera kuti vose. Ndinoda kukuudza kuti Kutarira zvaunoda kuita kwako basa uye sarudza chimwe. Zvino mushure iwe watanga basa rako, unogona kusarudza kana zvingabatsira kutevera mumwe munhu.
Enzanisa Top FRM Courses
Enzanisa The Best CFA Coursess